Indlela yokuthandaza kuThixo ngokweBhayibhile Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Indlela yokuthandaza kuThixo ngokwebhayibhile. Simele thandaza ngokholo, ukhonza uThixo, sisebenzisa amazwi ethu, sivuma izono zethu, ngentliziyo enombulelo kwaye inikezela yonke into ezandleni zikaThixo.
1 Indlela yokuthandaza kuThixo ngokwenyathelo ngenyathelo leBhayibhile
2 Iindlela ezi-7 zokuthandaza ngokwebhayibhile
2.1 1. Kholelwa ukuba uThixo uyakuva
2.2 2. Qala ngokuthetha izinto ezilungileyo ngoThixo
2.3 3. Buza uThixo ngamazwi akho
2.4 4. Vuma izono ucele ukuxolelwa izono zakho
2.5 5. Zibeke ezandleni zikaThixo
2.6 6. Bulela ngezinto ezintle
2.7 7. Yithi "egameni likaYesu"
3 Musa ukuthandaza kuphela xa uyidinga
4 Ukuthandaza nini
Indlela yokuthandaza kuThixo ngokwenyathelo ngenyathelo leBhayibhile
Akukho ndlela inye yokuthandaza ngokuchanekileyo, kodwa ibhayibhile iyabonisa Imigaqo esi-7 esifundisa indlela yokuthandaza kuThixo:
Kholelwa ukuba uThixo uyawuva umthandazo wakho.
Thetha izinto ezilungileyo ngoThixo.
Sebenzisa awakho amagama.
Vuma izono zakho kwaye ucele uxolelo.
Xelela uThixo ukuba uyamthemba nokuba uphendula athini.
Unika umbulelo ngezinto ezintle ebomini bakho.
Thandaza uthi "egameni likaYesu."
Iindlela ezi-7 zokuthandaza ngokwebhayibhile
1. Kholelwa ukuba uThixo uyakuva
Kholelwa ukuba uThixo uyakuva
Ngaphambi kokuba uqale, khumbula oko UThixo uyasithanda kwaye uyayiva yonke imithandazo yethu. Unamandla onke kwaye ufuna okona kulungileyo kuthi. Xa sithandaza, kufuneka siyikholelwe. Nabani na okholwayo uya kuyibona impendulo kaThixo.
Uphendule uYesu wathi kubo, Inene, inene, ndithi kuni, ukuba ninokholo, anithandabuzi, anisayi kwenza le nto umkhiwane yodwa; , iya kwenziwa.
Kwaye nantoni na oyicelayo ngomthandazo, ukholwa, uya kuyifumana.
UMateyu 21: 21-22
2. Qala ngokuthetha izinto ezilungileyo ngoThixo
Qala ngokuthetha izinto ezintle ngoThixo
Ngendlela elula, Xelela uThixo ukuba uyaqonda ukuba unguThixo usomandla, ukuba ungukumkani kwaye yonke into ixhomekeke kuye. Kukunqula uThixo oko. Njengokuba:
Nkosi, kumkani ungukumkani.
Ndiyamthanda, Thixo wam, ngenxa yokuba ulawula indalo iphela.
Thixo, umkhulu, umkhulu;
3. Buza uThixo ngamazwi akho
Buza uThixo ngamazwi akho
Sukusebenzisa iifomula okanye izivakalisi ngentloko. Yenza izicelo zakho kuThixo ngokholo nangokulula. Uyasazi kwaye uyasithanda ngenxa yento esiyiyo, akazukuchukumiseka xa sithetha ngobunzima. Mxelele indlela oziva ngayo. Thetha naye, ezinye izinto ungazithetha kuThixo ngamazwi akho:
Ndincede ndifumane umsebenzi mhlekazi.
Utata uyamphilisa udade wethu ogulayo.
Thixo wam, kutheni ndibuhlungu kangaka? Ndiyakudinga.
Nkosi, kufuneka ndiluphumelele uvavanyo, ndincede.
Tata, kuzobanjani kum ngoku? Ndincede.
4. Vuma izono ucele ukuxolelwa izono zakho
Vuma kwaye ucele uxolelo lwezono zakho
Yiba selubala noThixo. Sele eyazi yonke into, kodwa ufuna ukuva intliziyo yakho eguqukileyo. Xelela uThixo ngento oyenzileyo ucele uxolelo. Njengokuba:
Ndixokile. Uxolo mnumzana !.
Nkosi yam, ndicela uxolo. Ndiyikhuphele kuvavanyo.
Tata, bendicinga izinto ezimbi, ndixolele.
Thixo wam, ndiphumelele kwakhona, ndixolele isono sam.
5. Zibeke ezandleni zikaThixo
Zibeke ezandleni zikaThixo
UYesu wasifundisa ukuba sithi "mayenziwe intando yakho." Oku kuthetha ukuba emthandazweni wakho Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba nguThixo olawulayo. Yitsho, umzekelo:
Nkosi, ndifuna ukuba ezi zinto zenzeke, kodwa ndiyazi ukuba wena UnguThixo kwaye Uyayazi eyona nto indilungeleyo.
Ndiyayifuna le nto, Nkosi, kodwa yenza le nto ucinga ukuba yeyona ilungileyo. Ndiyakuthemba.
Ndilangazelela impendulo, Nkosi. Kodwa nokuba ayenzeki, ndiyazi ukuba uyandithanda kwaye into engcono izakuza.
Bawo, ukuba le nto ndiyicelayo kuwe ayisiyiyo elungileyo kum, mayibe njengoko ufuna
6. Bulela ngezinto ezintle
Enkosi ngezinto ezintle
Ukuthandaza asikokucela nje kuThixo. Njalo kulungile ukubulela emthandazweni ngento uThixo akwenzele yona. Cinga ngezinto ezintle kwaye umbulele uThixo ngazo.
Ezintweni zonke bulelani; kuba oko kukuthanda kukaThixo kuKristu Yesu ngani.
7. Yithi "egameni likaYesu"
Yitsho ngegama likaYesu
Ayisiyo ifomula yomlingo, kodwa Ukuphelisa umthandazo wakho "ngegama likaYesu" kunokukunceda ukhumbule ukuba kungenxa kaYesu esinokuthi ngokuzithemba sithandaze kuYise. UYesu wasifundisa ukuba sicele yonke into egameni lakhe. Akunyanzelekanga nokuba ibe sekupheleni. Kodwa khumbula: umthandazo awuva uThixo unokubulela kuphela kuYesu.
Musa ukuthandaza kuphela xa uyidinga
Umthandazo akufuneki ube yinto eyenzeka kube kanye ngexesha, kuphela ngamaxesha obunzima. Imithandazo enamandla ngokubanzi zivela kwindlela yokuphila yokuthandaza. Ke ngoko thandaza kuThixo yonke imihla. Amaxesha amaninzi ngemini. Thetha noThixo. Uzimisele ukuchitha ixesha kunye nawe. Ukholo lwakho luya kwanda kwaye ubomi bakho buza kutshintsha.
Ukuba ufuna ukuthandaza ngcono, buza uThixo. Ibhayibhile ithi Sinokucela uThixo ukuba asifundise ukuthandaza kwaye Uyaphendula. Thandaza kuThixo uthi: Nkosi, ndingathandaza njani?
Ngokukwanjalo ke noMoya uncedisana nokuswela kwethu amandla; Kuba into esiyicelayo ngokufanelekileyo, asiyazi, kodwa uMoya ngokwakhe uyasithethelela ngokugcuma okungathethekiyo.
AmaRoma 8: 26
Funda uMthandazo weNkosi, umzekelo, kwaye Cela uThixo akuncede uthandaze ngakumbi njengoYesu. Sukuyisebenzisa njengefomula yokuphinda, kodwa njengomzekelo wendlela yokuthetha noThixo:
Utata wethu oseZulwini! Malingcwaliswe igama lakho. Mabufike uBukumkani bakho. Makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini. Siphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla; Xolela amatyala ethu, njengokuba nathi sibaxolela abo banamatyala kuthi. Masingaweli ekulingweni, kodwa sihlangule kokubi, kuba bobakho ubukumkani, amandla nozuko ngonaphakade. Amen ".
Singathandaza ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo, akukho mithetho inzima kwaye ikhawulezayo malunga nendlela yokuthandaza. Ukuthandaza kuthetha noThixo. Umthandazo awunyanzelekanga ukuba ube mhle okanye ube kudala ukuba uviwe.
Ibhayibhile ithi kufuneka sithandaze ngamaxesha onke. UThixo uhlala eyiva imithandazo yethu, nokuba siphi na. Kodwa kwakhona kulungile ukuthatha ixesha lokuthandaza wedwa noThixo. Kufana nokuba nencoko esondeleyo kunye nomhlobo, ngaphandle kweziphazamiso. UYesu wayesoloko ezama ukuba nexesha lokuthandaza yedwa.
Waye ke yena emana ukuzisithelisa ezindaweni eziziintlango, athandaze.
IPodemos thandaza wedwa okanye kwiqela. Eyona nto ibalulekileyo lulwalamano noThixo, hayi oko abanye abantu bakucingayo. Ayisiyo isenzo sokuchukumisa, yi incoko ethembekileyo noThixo. Kwaye ayikokuphindaphindwa kwamagama omlingo ukwenza into ukuba yenzeke. Singayiphinda imithandazo yethu kuThixo, kodwa Asimele ukuvumela umthandazo ukuba ube Ukugqwetha ubuze.
Naxa sukuba uthandaza, uze ungabi njengabahanahanisi; ngokuba bethanda ukuthandaza bemi ezindlwini zesikhungu nasezimbombeni zezitrato, ukuze babonwe ngabantu; Ndikufungisa ukuba sele bawufumene umvuzo wabo.
Ke wena, xa uthandazayo, ngena egumbini lakho, uluvale ucango, uthandaze kuYihlo osemfihlekweni; aze uYihlo obona emfihlekweni akubuyisele ekuhleni.
Kwaye uthandaza, ungasebenzisi ukuphindaphinda okungenanto, njengeeNtlanga, abacinga ukuba ngentetho yabo baya kuviwa.
Ngoko musani ukuba njengabo; kuba ekwazi uYihlo enikusweleyo, ningekamceli.
UMateyu 6: 5-8
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku liyakunceda uqonde indlela yokuthandaza kuThixo ngokwebhayibhile. Ukuba ngoku ufuna ukwazi indlela uYesu asifundisa ngayo ukuthandaza, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.